होशे 11 ERV-NE - इस्राएलहरूले - Bible Gateway
इस्राएलहरूले परमप्रभुलाई भुल्यो
11 परमप्रभुले भन्नुभयो, “जब इस्राएल बालक थियो मैले त्यसलाई प्रेम गरें।
तब मैले आफ्नो छोरालाई मिश्रदेशबाट बोलाएँ।
2 तर जति-जति मैले इस्राएलीहरूलाई बोलाएँ,
त्यति-त्यति तिनीहरू मबाट टाढा भए।
तिनीहरूले बाल देवताहरूलाई बलि चढाँइरहे।
उनीहरूले मूर्तिको अगाडी धूप जलाए।
3 “एप्रैमलाई मैले हिँड्न सिकाएँ।
इस्राएललाई मैले अङ्गालोमा बोकें
अनि मैले नै तिनीहरूलाई निको पारें।
तर यी सबै कुरा तिनीहरू जान्दैनन्।
4 मैले तिनीहरूलाई प्रेमको डोरी
मायाको बन्धनले बाँधेर डोर्याएँ।
म त्यस्तो व्यक्ति थिएँ जसले उनीहरूलाई स्वतंत्र गराएँ,
म निहुरेर उनीहरूलाई खाना खुवाएँ।
5 “तर इस्राएलीहरूले परमेश्वरतर्फ जान अस्वीकार गरे। तिनीहरू फर्किएर मिश्र जाने छैनन्, त्यसको सट्टामा अश्शूरका राजा नै तिनीहरूका राजा हुनेछन्।6उनीहरूका शहरमाथि तरवार झुण्डाई दिइनेछ। यही तरवारद्वारा उनीहरूका शक्तिशाली मानिसहरूलाई वध गरिनेछ। उनीहरूको मुखियाहरूको काम नष्ट गरिन्छ।
7 “मेरो प्रजाहरू फर्कने आशा गर्छन् उनीहरू माथिका परमेश्वरलाई पुकार्छन् तर परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गर्नु हुँदैन।”
परमप्रभुले इस्राएललाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्न
8 “हे एप्रैम म तिमीलाई कसरी छोडिदिऊँ?
ए इस्राएल म तिम्रो रक्षा गर्न चाहन्छु।
म तिमीलाई कसरी अदमा जस्तै तुल्याऊँ!
म चाहँदिन कि तिमीलाई सबोयीम जस्तै बनाऊँ।
म आफ्नो मन बद्ली रहेछु,
तिमीप्रति दयाले मन पग्लिरहेछ।
9 म मेरो प्रचण्ड रिसलाई जित्न दिनेछैन्।
म फेरि एप्रैमलाई नष्ट पार्नेछैन।
म त परमेश्वर हुँ, म कुनै मानिस होइन।
म तिनीहरू माझ एक पवित्र छु।
म तिमीहरूसँगै छु।
म आफ्नो रिस देखाउँनेछैन।
10 म सिंह जस्तै गर्जने छु, म गर्जन्छु
अनि मेरा सन्तान मसँग आउने छन्,
र मेरो पछि-पछि हिँड्नेछन्।
मेरा सन्तानहरू डरले थर-थर काम्दै पश्चिमबाट आउनेछन्।
11 तिनीहरू चरा जस्तै वेगसित
मिश्र देशबाट आउनेछन्।
तिनीहरू अश्शूरको भूमिबाट ढुकुर जस्तै आउनेछन्
अनि म तिनीहरूलाई घरमा पठाउनेछु।”
परमप्रभुले यो भन्नु भयो।
12 “एप्रैमले मलाई झूटो देवताहरूले छोपेकोछ।
इस्राएलका मानिसहरूले मेरो विरोधमा षड्‌यन्त्र रचे।
तर यहूदा अहिले सम्म परमेश्वरसँग छ।
यहूदा पवित्र र साँच्चो छ।”